I-EIBOARD Interactive Whiteboard ngumboniso omkhulu ophathwayo, osebenza ngentsebenziswano yeprojektha kunye nekhompyuter yangaphandle eqhagamshelweyo. Ngokumalunga noyilo lwesisombululo esisisiseko, i-Interactive Whiteboard yenza ukuba i-multi-touch function xa iqhagamshelwe kwikhompyuter yangaphandle kunye neeprojekthi zeprojektha isikrini sekhompyuter kwibhodi emhlophe esebenzayo. Isoftware yolungelelwaniso ifakwe kwikhompyuter ukulungelelanisa umsebenzi wokuchukumisa webhodi emhlophe esebenzayo. Ukongeza, isoftware yokufundisa esebenzisanayo nayo ifakelwa kwikhompyutha ukwenzela ukufundisa ngonxibelelwano. Le software inceda ootitshala bacwangcise isifundo, ukufundisa ngokubanzi, ukurekhodwa kwesifundo kunye nezinye izinto ezininzi. Kukho iisayizi ezininzi ezahlukeneyo kunye nokwenza ngokwezifiso ukhetho.
I-EIBOARD Interactive Whiteboard ngumboniso omkhulu ophathwayo, osebenza ngentsebenziswano yeprojektha kunye nekhompyuter yangaphandle eqhagamshelweyo. Ngokumalunga noyilo lwesisombululo esisisiseko, i-Interactive Whiteboard yenza ukuba i-multi-touch function xa iqhagamshelwe kwikhompyuter yangaphandle kunye neeprojekthi zeprojektha isikrini sekhompyuter kwibhodi emhlophe esebenzayo. Isoftware yokulinganisa ifakwe kwikhompyuter ukulungelelanisa umsebenzi wokuchukumisa webhodi emhlophe esebenzayo. Ukongeza, isoftware yokufundisa esebenzisanayo nayo ifakwe kwikhompyutha ukwenzela ukufundisa ngonxibelelwano. Le software inceda ootitshala bacwangcise isifundo, ukufundisa ngokubanzi, ukurekhodwa kwesifundo kunye nezinye izinto ezininzi.
Iibhodi ezimhlophe ze-EIBOARD ezisebenzayo ziza ngobukhulu obuhlukeneyo, obuyi-82 ", 96" kunye ne-105". Ngokubhekiselele kwiprojektha, ibhodi emhlophe edibeneyo isebenza phantse nayo nayiphi na iprojektha yomthengi nokuba iprojekti inesiphelo esiphezulu okanye esisezantsi.
Iimpawu ze-EIBOARD Interactive whiteboards njengoko zingezantsi zenza ukufundisa kunye nomboniso ube nomtsalane kwaye usebenze ngakumbi.
* Ufakelo olulula kunye noQhagamshelo
* IBhodi yokuBhala ye-Multi-Touch enesoftware yokufundisa ebandakanyiweyo
* Umphezulu weCeramic njengokuzikhethela kwiipeni ezomileyo ezisulekayo
* Umphezulu weMagnetic ozinzileyo, Ukuxhathisa ukonakala
* Ubungakanani bebhodi emhlophe ezininzi kunye ne-Aspect Ratio ngokuzithandela
* Iibhari zesixhobo ezimfutshane zokuNika iNgcaciso kunye neSihlomelo
I-EIBOARD ibhodi emhlophe esebenzayo, ekwabizwa ngokuba yi-EIBOARD smart board, sisiboniso esisebenzisanayo kwifomathi yebhodi emhlophe esabela kwigalelo lomsebenzisi ngokuthe ngqo okanye ngezinye izixhobo.
Ngexesha elithile, iibhodi ezimhlophe eziqhelekileyo zisetyenziswa ngokuqhelekileyo njengendlela abantu abanokwabelana ngayo ngemiyalezo, ulwazi olukhoyo, kunye nokuzibandakanya kwintsebenziswano kunye nokuphuhliswa kweengcamango. Ngeenjongo ezifanayo zentsebenziswano engqondweni, iibhodi ezimhlophe ezisebenzisanayo ziyakwazi ukuqhagamshela kwi-Intanethi kunye nokwenza imisebenzi kunye nokusebenza ngoko nangoko.
Isoftware yebhodi emhlophe esebenzayo ihlala ibandakanya iitshathi ekulula ukuzisebenzisa, iipoli kunye neegrafu, kubandakanywa iinguqulelo ezibonakalayo zezixhobo umntu anokuzifumana kwigumbi lokufundela njengeerula ikhampasi okanye iiprotractor. Bangadlala iindidi ezahlukeneyo zemidiya kwaye banike ootitshala izifundo ezisebenzisanayo zabafundi babo.
Iibhodi ezimhlophe ezisebenzisanayo zisetyenziswa kumagumbi okufundela, kumagumbi eebhodi, ubunjineli, uqeqesho kunye nokucwangciswa kobuchule kweentlobo ezininzi zeeprojekthi.
Guqula igumbi lakho lokufundela okanye igumbi lebhodi nge-EIBOARD Interactive Whiteboard
Indawo yokusebenza yale mihla okanye indawo yemfundo iye yavela kakhulu kule minyaka imbalwa idlulileyo. Ukuqhubela phambili kwetekhnoloji kwenze ukuba kube lula ngakumbi ukwabelana ngezimvo ezibandakanyayo, ezisebenzisanayo kunye neenkcazo-ntetho eklasini nakwigumbi lebhodi. Ngolu kuqhubela phambili, kuza iindlela ezininzi ezingakumbi zokuba abantu baveze izimvo zabo ngendlela engabandakanyiyo kuphela kwaye inika umdla kodwa inceda ekuqinisekiseni ukuba lonke ulwazi olufanelekileyo luyagcinwa.
Ibhodi emhlophe ye-elektroniki sisixhobo esifanelekileyo kwindawo yokusebenza yenkulungwane yama-21. Iqhagamsheleka kwi-smartphone yakho, ilaptop, okanye nasiphi na esinye isixhobo esiphathwayo, ikuvumela ukuba unikeze imiboniso enamandla kubandakanya imizobo, iividiyo kunye nokunye okuninzi. Ukongeza, ungabhala kwiscreen njengoko ubuya kwenza ngebhodi emhlophe eqhelekileyo, ukuze uqaqambise iingongoma ezithile okanye uxoxe ngezimvo ezintsha nangaliphi na ixesha. Ibhodi emhlophe edibeneyo inika izixhobo ezininzi. Iibhodi zethu ziza zifakwe kwangaphambili kunye ne-MS-ehambelanayo ne-whiteboard software.
Iibhodi ezimhlophe ezisebenzisanayo ziluncedo ngakumbi kwigumbi lokufundela, njengoko zibandakanya kakhulu kuneebhodi zemveli kunye neeprojekti. Iibhodi ezimhlophe ezisebenzisanayo zivumela abafundi ukuba bafunde, baqonde, bangqubanise kwaye basebenzisane kwiingcamango kunye. Ootitshala banokusebenzisa iintlobo ngeentlobo zeempawu zobuchwepheshe kwibhodi esebenzisanayo ukuphucula amava eklasi kwaye bagubungele izihloko ngokubanzi nabafundi babo.
Iibhodi ezimhlophe ze-elektroniki zikwaluncedo kakhulu kwindawo yokusebenzela ekuzibandakanyeni nasekuboniseni intetho, intsebenziswano, kunye nokuzilolonga kweqela. Ibhodi ye-elektroniki inokuguqula intlanganiso ye-avareji ye-boardroom ibe ngamava asebenzayo, ashukumisayo kunye nokucinga phambili.
Ngaphambili: Multimedia All-in-one Whiteboard
Okulandelayo: Itheminali eSebenzayo yeGumbi loMamkeli
Imveliso Interactive Whiteboard
Iinkcukacha Iteknoloji I-infrared
Ubhalo longeniso ngo Usiba, umnwe, okanye naziphi na izinto ezingacacanga
Ukubamba Okuninzi 20 amanqaku touch
Ixesha lokuphendula <6ms
Isantya sekhesa 200"/ms
Jonga i-engile Ukuthe tye 178°, nkqo 178°
Ukutya umbane ≤1W
Umphezulu webhodi I-Metal Nano (iCeramic iyakhethwa)
Izitshixo ezishushu zomzimba 19*2
Uhlobo lwesakhelo Isakhelo se-aluminium ye-alloy
Inkqubo yokusebenza IiWindows
Ukunikezwa Amandla USB2.0/3.0
Ubushushu bokusebenza (C) -20℃~65℃
Umsebenzi wokufuma (%) 0% ~ 85%
Ubushushu bokugcina -40℃~80℃
Ukugcinwa kokufuma 0%~ 95%
Izincedisi 5M USB Cable*1, isibiyeli-endongeni*4, ipeni*2, software CD*1,QC kunye newaranti amakhadi*1, faka ikhadi manual*1
•Izixhobo zokusebenza ezininzi kuzo zonke izifundo, ukubhala, ukuhlela, ukuzoba, ukusondeza njl.njl.
• UKuqatshelwa kweMilo (iPeni ekrelekrele/iimilo) , ukuNakwa kokubhala ngesandla
• Irekhoda yesikrini kunye nokuhlelwa kwemifanekiso
• Faka imifanekiso, iividiyo, isandi njl.
• Ukungenisa kunye nokuthumela ngaphandle iifayile zeofisi, kunye neefayile zokugcina, ukuprinta okanye ukuthumela ii-imeyile njl.
• Ngaphezulu kweelwimi ezingama-20:IsiNgesi, isiArabhu, isiRashiya, iSpanish, isiPhuthukezi, njl.
Izinto / imodeli Nombolo.
Iibhodi eziMhlophe eziSebenzayo
Ibhodi ehlakaniphile yokuFundisa